Momba ny fampiasana fitaovana | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Seho mivantana mivantana "Ginbaku Actress and Modern Girl"
Magome Writers' Village Fantasy Theater Festival
Lahateny / atrikasa
[Fanovàna votoaty]Fandraisana ireo mpilalao Performance Kids Tokyo!
Ryuko Memorial Hall Summer Vacation Ankizy Taratasy Fangatahana Programa
Fetiben'ny Otawa 2022 Fizarana 2 Fotoana hiatrehana ny kolontsaina japoney nentim-paharazana
Atrikasa Planner Concert Junior
Ryuko Memorial Museum Masterpiece Exhibition "Mifantoka amin'ny sary hoso-doko nataon'i Ryuko miresaka momba ny rivotra mangatsiaka" Gallery Talk
Fampahafantarana ny tolo-bidy
Fampahalalana momba ny asa
Fandraisana ireo mpanohana ny fampisehoana!
Taratasy fampahalalam-baovao momba ny zavakanto ara-kolontsaina Ota Ward "ART bee HIVE" Ofisialy momba ny fahaterahan'ny toetran'ny PR!
Fetiben'ny teatra fanta-daza Magome Writers' Village Fantasy DVD / Fampiharana fividianana entana
Lahatsary fanehoan-kevitra momba ny fampirantiana
2021 corb tantely feon'ny tantely
Inona ny toetran'ny PR ofisialy "Rizby"?
Momba ny fikambanana>
Momba ny fanakanana ny fihanaky ny aretina coronavirus vaovao>
Momba ny fampiasana trano ara-kolontsaina mba hisorohana ny fihanaky ny otrikaretina coronavirus vaovao
Mba hisorohana ny fiparitahan'ny otrikaretina coronavirus vaovao dia mangataka fameperana sy fitandremana kely izahay rehefa mampiasa azy, ary mangataka ny mpampiasa rehetra izahay mba hanohy ny fisorohana ny fihanaky ny otrikaretina coronavirus vaovao. Misaotra noho ny fahatakaranao sy ny fiaraha-miasa. .
Mariho fa mety ho ferana ny fampiasana ilay trano arakaraka ny toe-javatra misy ny aretina amin'ny ho avy.
XNUMX. XNUMX.Fitaovana kendrena, vanim-potoana sns.　* Fanavaozana 5/23
XNUMX Mey, faha-XNUMX taonan'ny Reiwa-mandritra ny fotoana
Ora fisokafan'ny trano tsirairay
Mbola hisokatra ara-dalàna izany.
Misy famerana sasany momba ny tanjona fampiasana."XNUMX. Fameperana sy fangatahana miankina amin'ny tanjon'ny fampiasana"Mba jereo miaraka amin'ny.
Fandoavana ny saram-pandraisana
Amin'izao fotoana izao, na inona na inona sokajy fampiasana, raha manafoana ny fampiasana ny trano ianao mba hisorohana ny fihanaky ny areti-mifindra, dia haverinay ny vola feno.Mifandraisa amin'ny trano tsirairay raha mila fanazavana fanampiny.
XNUMX. XNUMX.Ferana amin'ny isan'ny mpampiasa
Amin'ny ankapobeny, aorian'ny fampiharana tanteraka ny fepetra mifehy ny otrikaretina mifototra amin'ny fangatahan'ny governemanta nasionaly sy ny governemanta Metropolitan Tokyo, raha misy hetsika iray, dia hiteny mafy kokoa noho ny mahazatra ny mpihaino, sns, ary ho ampy ny hetsika na ny fepetra ilaina. XNUMX% na latsaka ho an'ny hetsika tsy omena ihany.
XNUMX. XNUMX.Fepetra fisorohana aretina
Mangataka amin'ny mpikarakara sy mpitsidika rehetra tafiditra amin'ny fotodrafitrasa sy fampisehoana izahay mba hiara-miasa amin'ireo fepetra fisorohana aretina manaraka ireto.
Amin'ny ankapobeny, manaova saron-tava araka ny tokony ho izy.
Vonoina tsara ary sasao ny tananao.
Miezaha mamono ny resaka (aza mihorakoraka) ary etikety kohaka.
Hamarino tsara fa mety ny elanelana misy eo amin'izy ireo.
Hiezaka izahay hahazo ny rivotra.
Ho an'ny sakafo sy fisotroana ao amin'ny efitrano (ankoatra ny efitrano fandrarana ny fihinanana sy ny fisotroana aloha), dia azo atao ny misakafo antoandro sns mandritra ny fotoana fohy aorian'ny fampiharana ny fihinanana mangina sy ny fiantohana ny rivotra.
Hampiasa mavitrika ny rindranasa fanamafisana ny fifandraisana (COCOA) an'ny Ministeran'ny Fahasalamana, ny Asa ary ny Fiaraha-miasa.
Hamafisinay ny fandrefesana ny maripana ary handraisana fepetra toy ny fiandrasana ao an-trano raha voan'ny tazo mahery ianao (*) raha oharina amin'ny tazo ara-dalàna na raha manana an'ireto soritr'aretina manaraka ireto ianao.
Ny soritr'aretina toy ny kohaka, dyspnea, malaise ankapobeny, tenda, mikitroka ny orona / orona, aretin-tory / olfaction, fanaintainan'ny taolana / hozatra, fivalanana, mandoa, sns.
Rehefa misy fifandraisana akaiky amin'ny fitsapana PCR tsara
Famerana ny fifindra-monina, tsidiho ny tantara any amin'ny firenena / faritra izay mitaky fe-potoana fandinihana aorian'ny fidirana, ary fifandraisana akaiky amin'ny mponina, sns.
* Ohatra amin'ny fepetra momba ny "rehefa misy hafanana ambony noho ny hafanana mahazatra" …… Rehefa misy hafanana 37.5 ° C na ambony
XNUMX.Fepetra sy fangatahana arakaraka ny tanjon'ny fampiasana
Raha misy ireto tanjona fampiasana ireto dia hoferana na hofoanana ny fampiasana mandritra izao fotoana izao.
Ho fanampin'izay, mikasa ny hanapa-kevitra ny hanainga ny fetra mifototra amin'ny toe-javatra ho avy toy ny fivoaran'ny sori-dalana isika.
a) Mihinana sy misotro
Tsy maninona ny misakafo antoandro ao amin'ny efitrano (ankoatra ny efitrano fandrarana ny fihinanana sy ny fisotroana hatramin'izay), fa mba tandremo ireto hevitra manaraka ireto.
Mba ho azo antoka ny rivotra.
Mipetraha amin'ny fomba tsy mifanatrika.
Azafady azafady ny elanelana mety misy eo amin'ny mpampiasa.
Aza fady fizarana hazokely sy lovia eo amin'ireo mpampiasa.
Aza miady amin'ny resaka mafy mandritra ny sakafo.
Ao amin'ny efitrano ahafahanao mihinana sy misotro ianao dia ataovy izao manaraka izao.
Fikarakarana sakafo sy zava-pisotro (anisan'izany ny fisotroana) ao amin'ny trano
Ezaka taorian'ny XNUMX Mey (XNUMX Mey, taona faha-XNUMX tao Reiwa, Tokyo)
B) Fampiasana izay mila fiheverana manokana
Rehefa mampiasa amin'ireto tanjona manaraka ireto dia mitandrema azafady mba hiarovan-tena amin'ny halaviran'ny tsirairay.
Mahjong, Mandehana, Shogi
Fampiharana mozika (mozika fitaovana)
Fampiharana mozika (mozika feo)
Hira shigin / folk
Dihy hafa (dihy hula)
Dihy ara-panatanjahantena (dihy aerôbika, dihy jazz, sns.)
Aza fady, araka izay azo atao, ny resadresaka mivantana sy mivantana.
Areti-maso ny tananao sy ny rantsananao isaky ny kilalao.
Fitaovana mamono tsy tapaka tsy tapaka (sombin-javatra, mandeha vato, takelaka, taila mahjong, tapa-kazo sns.).
Fampiharana mozika-yoga, sns.
Raha ny fanatanjahan-tena dia miteraka fofonaina, aza hadino kokoa.
Tandremo azafady mba tsy hifandray be loatra amin'ny mpampiasa.
Aza atao feo sy mihira mivantana.
Mba hisorohana ny fiparitahana rehefa mihira dia tazony XNUMXm na mihoatra amin'ny olona rehefa mihira, na ny mpikarakara dia tokony hametraka partition toy ny fizarazarana eo anelanelan'ny sehatra sy ny seza.
Manaova rivotra indray mandeha isaky ny XNUMX minitra.
Asio otrikaretina isaky ny miova ny mpampiasa ny mikrô, ny fanaraha-maso lavitra, na ny tontonana fikasihana.
Rehefa mihira ianao dia aza mampiasa mikrô iray miaraka amin'ny hafa.
Angatahina ny mpitsidika hanao saron-tava.Raha tsy manana saron-tava ianao dia tokony hizara izany ny mpikarakara.
Mba diniho ny zavatra toy ny fandaminana ny seza ao amin'ny efitrano mifanila.Azafady mba tsy handamina seza mivantana eo anoloanao.
Mba tapaho ny toerana mihira.Aza adino ny mihira rehefa mihetsika.
Mba raiso ny fepetra hisorohana ny olona marobe tsy hijanona ao amin'ny toerana mihira.
Rehefa ampiasaina miaraka amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, miaraka amin'ny 1-8."Fikarakarana ny sakafo sy ny zava-pisotro (anisan'izany ny fisotroana) ao amin'ny trano"Misaotra tamin'ny ezaka nataonao.
Aza adino ny mihinana sy misotro ary misotro amin'ny toerana mihira.
Aza fady azafady amin'ny fampiasana raha tsy salama vatana ianao toy ny tazo na kohaka.
Azafady mba tazomy ny fahafahan'ny efitrano
(Raha misy hetsika mafy (kaonseritra rock, hetsika ara-panatanjahantena, sns.), ny fahafaha-manao ambony indrindra dia XNUMX%.
Azafady mba asio elanelam-potoana mety eo anelanelan'ny mpampiasa.
Azafady mba ampio izahay hanasa tanana rehefa miditra sy mivoaka, ary mampihatra fomba fanao amin'ny kohaka.
Mba manaova sarontava.Aza mifidy ny hiditra amin'ny tranombakoka raha mbola tsy nitafianareo (azafady anontanio ny mpiasa)
Rehefa misakafo sy misotro ao amin'ny efitrano (ankoatra ny efitra fandrarana ny fihinanana sy ny fisotroana teo aloha), dia tsy maninona ny misakafo antoandro sns mandritra ny fotoana fohy aorian'ny fampiharana ny fihinanana mangina sy ny fiantohana ny rivotra.
Mandrosoa matetika rehefa mampiasa ilay toerana (10 minitra isan'ora)
Aza fady intsony amin'ny fampiasana azy mandritra ny fotoana lava ao amin'ny habaka iraisana (lobby, sns.)
Ento miaraka aminao ireto fako ireto
Raha voan'ny virus coronavirus vaovao ianao ao anatin'ny 2 herinandro aorian'ny fampiasana azy, dia atoroy azy ity amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny fotodrafitrasa ampiasainao avy hatrany.
Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny antontan-taratasy tsirairay.Azafady, jereo ny torolàlana momba ny fisorohana ny fihanaky ny otrikaretina ho an'ny indostria tsirairay.
Fangatahana amin'ireo mpampiasa trano
Fangatahana amin'ny mpikarakara
Lisitry ny torolàlana amin'ny fisorohana ny fihanaky ny aretina amin'ny alàlan'ny indostria (tranokalan'ny Secretariat Cabinet)
XNUMX.Momba ny fisokafan'ny efitrano fahatsiarovana
Mbola hisokatra toy ny mahazatra ny efitrano fahatsiarovana tsirairay.
Amin'ny fotoana hisokafana dia handray fepetra ilaina amin'ny fomba fiasa izahay mba hisorohana ny fihanaky ny aretina coronavirus vaovao, miorina amin'ny torolàlana mifandraika amin'izany.
Miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana naterak'izay ary mankasitraka ny fahatakaranareo sy ny fiaraha-miasa.
Trano Fahatsiarovana Ryuko, Efitrano Fahatsiarovana an'i Kumagai Tsuneko, Efitrano Fahatsiarovana an'i Sanno Kusado
XNUMX.Momba ny orinasa tohanan'ny fikambanana
Amin'ny fampiharana ny tetikasa dia nandray fepetra ilaina izahay amin'ny fomba fisorohana ny fihanaky ny aretina coronavirus vaovao.Raha mila pitsopitsony dia mba jereo ny pejy fampahalalana momba ny fampisehoana tsirairay.
Miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana ary misaotra anao noho ny fahazoana sy fiaraha-miasa.